Dhageyso: Xalqada 22aad ee Barnaamijka Al Xuruubu Saliibiyah.
Weerar 6 Askari Itoobiyaan ah lagu dilay oo ka dhacay gobolka Baay.
Sarkaal Sirdoon iyo Ergay lagu dilay Muqdisho iyo duleedkeeda.
Al Shabaab oo sheegatay Mas'uuliyadda qarax lagu beegsaday Agaasimaha Waaxda Socdaalka.
goorta ay ciidamada Kenya isaga baxayaan dalka Soomaaliya oo la shaaciyay [Warbixin].
Azarbijaan oo magaalo Sedaxaad kala wareegtay Melleteriga Armeeniya.
Weeraro lagu miray saldhigyo kuyaal Ceelwaaq iyo Buurdhuubo.
Saturday May 16, 2020 - 11:46:44 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warbaahinta Islaamiga ee Al-furqaan oo bil walba oo Ramadaan ah baahisay barnaamij Taariikheed ayaa waxay halkan idinkugu soo baahineysaa barnaami cusub oo taxane ah kuna saabsan taariikhda "Xuruubusaliibiyah".
Barnaamijka oo inoo socon doona inta lagu guda jiro soonka ayaa wuxuu ka sheekeynayaa duullaanadii ay faranjidu ku qaaday halbowlayaasha caalamka islaamka kuna qabsatay Beytulmaqdas sannadkii 492dii Hijriyada oo waafaqsan 1099kii Miilaadiyada iyo falcelintii ay sameeyeen Muslimiinta.
Nin walbaba tallaabadi
Halku tagay ha geysee
Qofba dunida wuxu taro
Wax ma qariyo taxanee
Taariikhaha ka daawada
Halkan Ka Degso Qeybta 22 Barnaamijka Xuruubusaliibiyah
Dhagayso: Gedo iyo guulaha Islaamka [Xalqada 8aad].
Dhagayso: Gedo iyo guulaha Islaamka [Xalqada 7aad].
Dhagayso: Gedo iyo guulaha Islaamka [Xalqada 6aad].
Dhagayso: Gedo iyo guulaha Islaamka [Xalqada 5aad].
Dhagayso: Gedo iyo guulaha Islaamka [Xalqada 4aad].
Dhagayso: Gedo iyo guulaha Islaamka [Xalqada 3aad].
Dhagayso: Gedo iyo guulaha Islaamka [Xalqada 2aad].
Dhagayso: Gedo iyo guulaha Islaamka [Xalqada 1aad].
Dhageyso: Ciidamo Mareykanku tababaray oo dad Shacab ah ku xasuuqay deegaanka Leego Sh/hoose.
Dhageyso: Maxkamadda Islaamiga Jubbooyinka oo xukun dil ah ku ridday Nin Saaxir ahaa.
Sawirro: Mid kamida Beelaha gobolka Hiiraan oo Nabadoon ku caleema saaratay degmada Moqokori.
11/10/2020 - 16:12:59
Sawirro: Nusratul Islaam Walmuslimiin oo soo dhoweyn heer sare ah usameysay Maxaabiis lagasii daayay Xabsiyada Maali.
11/10/2020 - 08:13:18
Sawirro: Boqolaal Neef Geel ah oo diyo ahaan loogu kala wareejiyay Beelo ku dagaallamay Soomaaliya.
06/10/2020 - 06:13:47
Sawirro+ Warbixin: Beesha Sade oo caleema saaratay Suldaanka cusub ee Jubbooyinka.
04/10/2020 - 20:23:55
Sawirro+Warbixin: Xaflad heer sare ah oo lagu Caleemo saaray Suldaanka Muddulood Ee Jubbooyinka.
28/09/2020 - 19:45:45